နေပြည်တော်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
နေပြည်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၌ တည်ရှိသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ကို ပျဉ်းမနားမြို့၏ အနောက်ဘက် ၂ မိုင် (၃.၂ကီလိုမီတာ) ဝေးသော အစိမ်းရောင်ကွင်းပြင်နေရာသို့ တရားဝင်ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ ယခင်မြို့တော်ဟောင်း ရန်ကုန်မြို့ ၏မြောက်ဘက် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် မိုင် ၂၀၀ (၃၂၀ ကီလိုမီတာ) မျှကွာဝေးသည်။
နေပြည်တော် တည်နေရာပြ မြေပုံ
ကိုဩဒိနိတ်: 19°45′N 96°6′E﻿ / ﻿19.750°N 96.100°E﻿ / 19.750; 96.100ကိုဩဒိနိတ်: 19°45′N 96°6′E﻿ / ﻿19.750°N 96.100°E﻿ / 19.750; 96.100
၇၀၅၄.၃၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၇၂၃.၇၁ စတုရန်းမိုင်)
၁၁၅ မီတာ (၃၇၇ ပေ)
၁၃၁.၁/km၂ (၃၃၉.၅/sq mi)
• လူမျိုးများ သိပ်သည်းမှု
၁၃၁.၁/km၂ (၃၃၉.၆/sq mi)
နေပြည်တော်ရှိ ဥပ္ပါတသန္တိ စေတီတော်
မြို့တော်၏တရားဝင်အမည် ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက် မြန်မာ့တပ်မတော်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။၂၀၀၉ ခုနှစ်စာရင်းအရ လူဦးရေ ၉၂၅,၀၀၀ ရှိပြီး၊ ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေး ပြီးလျှင် တတိယ လူဦးရေအများဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။ မြို့၏နေရာအများအပြားသည် အစိုးရလူနေအဆောက်အဦးများ ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ သမ္မတအိမ်တော် နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ တို့သည် နေပြည်တော်၌ တည်ရှိသည်။ နေပြည်တော်သည် ၂၄ နှင့် ၂၅ ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ တတိယကြိမ်မြောက် ဘင်းမ်စတက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ နဝမကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ၂၀၁၃ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ များကျင်းပခဲ့သည်။
၁ ဝေါဟာရ ရင်းမြစ်ဗေဒ
၁၀.၃ ဘတ်စ်ကား နှင့် ကားများ
နေပြည်တော်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုရလျှင် “တော်ဝင်မြို့တော်”၊ “ဘုရင်နန်းစိုက်ရာ” သို့မဟုတ် “ဘုရင်နန်းစံရာ” ဖြစ်သည်။ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ မင်းနေပြည်များ၏ နောက်ဆက်စကားလုံးအဖြစ် သုံးစွဲသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မန္တလေးကို ရတနာပုံနေပြည်တော် (Yadanabon Naypyidaw) ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
နေပြည်တော်ဟူ၍ ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်း နေပြည်တော်၏သမိုင်းသည် တိုတောင်းလှသော်လည်း နေပြည်တော်မြို့တော်တည်ထားသော ယခု လက်ရှိမြေနေရာများသည် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်သည့် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(BIA)၏ စစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိခဲ့သောနေရာများဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းမြေနေရာများ၏ သမိုင်းမှာ အလွန်ရှည်လျားလှသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ယိုးဒယားမှ ချီတက်လာပြီး ပျဉ်းမနား-လယ်ဝေးတွင် စစ်ဌာနချုပ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယခု နေပြည်တော်မြို့တော်သည် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် အစပြုခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ "အောင်မြေ" တွင် တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ နေပြည်တော်ကို ပျဉ်းမနားမြို့၏အနောက်ဘက် ၂ မိုင် (၃.၂ ကီလိုမီတာ ) အကွာတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ၏မြောက်ဘက် ခန့်မှန်ခြေအားဖြင့် မိုင် ၂၀၀ (၃၂၀ ကီလိုမီတာ) အကွာတွင်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အေးရှားဝေါလ် နှင့် ထူးလီမိတက် အပါအဝင် အနည်းဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ ၂၅ ခုကို စစ်အစိုးရမှ ငှားရမ်းခဲ့ပြီး တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်စေခဲ့သည်။ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအားလုံး ပြီးစီးမှုမရှိသေးသော်လည်း ၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် အစိုးရအဖွဲ့များ နေပြည်တော်သို့ အဖွဲ့များခွဲ၍ စတင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ငါးရက် ကြာပြီးနောက် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီ တွင် စစ်တပ်ကုန်တင်ယာဉ် ၁၁၀၀ ပါသည့် ဒုတိယယာဉ်တန်းသည် အစိုးရဝန်ကြီးဌာန ၁၁ ခု ကိုတင်ဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့မှထွက်ခွါခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးဌာနများအားလုံးကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်တွင် နေရာချထားပြီးဖြစ်ရန် မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ကတိုက်ကရိုက် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည် ကျောင်းများနှင့် အခြားနေရာများ မပြည့်စုံခြင်းကိုဖြစ်စေပြီး၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများကို ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ခွဲခွာခြင်းကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အစိုးရသည် အစပိုင်းတွင် အစိုးရအလုပ်သမားများ၏ မိသားစုများအား နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို တားဆီးခဲ့သည်။ စစ်တပ်ဌာနချုပ်များသည် အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနများမှ ခွဲခြားသည့်နေရာတွင် ထားရှိသည်။ အရပ်သားများကို စစ်တပ်နှင့် အစိုးရ နေရာများသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားသည်။ အစိုးရရုံးများ အနီးရှိ စီးပွားရေးဇုန်အတွင်းသို့ ဈေးသည်များ ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။ အစိုးရအလုပ်များအတွက် အရာရှိများသည် အတိုကောက်အဖြစ် “နပတ” ဟုသုံးစွဲသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်တွင်၊ စစ်သည် ၁၂,၀၀၀ ကျော်သည် မြို့တော်အသစ်တွင် ပထမဆုံး လူထုဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ချီတက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဂျပန်သိမ်းပိုက်မှုကို တော်လှန်ခဲ့သော နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သည့် တပ်မတော်နေ့ကိုဂုဏ်ပြုရန် ကြီးမားသည့် စစ်ရေးပြ ချီတက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကွန်ကရစ် စစ်ရေးပြကွင်း အတွင်းသို့ ရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကို တားမြစ်ထားပြီး၊ ကွင်းထဲတွင် မြန်မာမင်းများဖြစ်ကြသည့် အနော်ရထာ၊ ဘုရင့်နောင်နှင့် အလောင်းဘုရား တို့၏ကြီးမားသည့် ရုပ်တုကြီးသုံးခု ရှိသည်။ ထိုမင်းသုံးပါးကို မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အရေးအကြီးဆုံးသောဘုရင်များအဖြစ် မှတ်ယူထားသည်။ မြို့၏အမည်ကို ထိုစစ်ရေးပြပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်း တရားဝင်ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ မြို့တော်၏တရားဝင်အမည် ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက် မြန်မာ့တပ်မတော်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
နေပြည်တော်သည် မြန်မာပြည်၏ အလယ်ဗဟိုနားတွင်တည်ရှိပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို အုပ်ချုပ်ရန်အတွက် နေရာကောင်းဖြစ်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် ဗဟိုချက်မဖြစ်ပြီး၊ ရှမ်း၊ ကယားနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့နှင့် ထိစပ်နေသည်။ အစိုးရအဖွဲ့ အနီးအနားတွင်တည်ရှိနေခြင်းဖြင့် ကာလရှည်ကြာစွာ မငြိမ်သက်ခဲ့သည့်ဒေသများကို တည်ငြိမ်မှုရှိလာစေရန် ထောက်ကူပေးနိုင်သည်။ နေပြည်တော် မြို့တော်ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့သည် မြန်မာပြည်၏ အဓိကစီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်သဖြင့် လူဦးရေထူထပ်များပြားသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ အစိုးရရုံးများနှင့် လူနေရပ်ကွက်များ ရောထွေးနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ မြို့အတွင်း စစ်တပ်ရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ စသည်တို့အပြင် ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရာတွင် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ရန်ကုန်မြို့တွင် စနစ်တကျမရှိခြင်းတို့ကြောင့် မြို့တော်သစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ အုပ်ချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ယခုလက်ရှိ နေပြည်တော် တည်ရှိနေသော နေရာသည် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည့် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (BIA) ၏ စစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိခဲ့ရာနေရာ (သို့မဟုတ်) မြန်မာပြည်၏ အောင်မြေ ဖြစ်သည်။
နောင်အနာဂတ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အားကစားပြိုင်ပွဲများ စသည်တို့ကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်သည့်အတွက် နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါ နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသည့် အစိုးရဧည့်ဂေဟာများ၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသည့် ဟိုတယ်များ စသည့် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက် အလွန်ရေးပါသည့် လွှတ်တော်အဆောက်အအုံများလည်း ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ယင်းလွှတ်တော် အဆောက်အအုံများအတွင်း လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည်။
နေပြည်တော်သည် ပဲခူးရိုးမတောင်တန်းနှင့် ရှမ်းရိုးမတောင်တန်း နှစ်ခုတို့၏အကြားတွင် တည်ရှိသည်။ တရားဝင်စာရင်းများအရ မြို့တော်သည် ၇၀၅၄.၃၇ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းပြီး၊ လူဦးရေ ၉၂၄,၆၀၈ ရှိသည်။ ချောင်းမကြီးဆည်သည် နေပြည်တော်၏မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာအဝေးတွင်ရှိပြီး၊ ငလိုက်ဆည်သည် မြို့၏တောင်ဘက် ကီလိုမီတာအနည်းငယ် အကွာတွင်ရှိသည်။ ရေဆင်းဆည်သည် မြို့၏ အရှေ့မြောက် ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်ရှိသည်။ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၉° ၁၈' နှင့် ၂၀° ၂၅' အကြား ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅° ၄၅' နှင့် ၉၆° ၄၅' အကြားတွင် တည်ရှိသည်။ နေပြည်တော်သည် ရန်ကုန်နှင့် ၃၂၀ ကီလိုမီတာ (၁၉၈ မိုင်) ၊ မန္တလေးမြို့နှင့် ၁၃၈ မိုင် ကွာဝေးသည်။
လူနေအိမ်ရာအကွက်များသည် သေချာစွာဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ အခန်းများကို ရာထူးအလိုက်နှင့် အိမ်ထောင်ရှိ/မရှိ အပေါ်မူတည်ပြီး ချထားပေးသည်။ မြို့တွင် လက်ရှိအခန်းတွဲ လေးထပ်တိုက် ၁၂၀၀ ရှိသည်။ ကြီးမားသည့် အခန်းတွဲတိုက်များစွာသည် ခေါင်မိုးအနီရောင်၊ အစိမ်းရောင် သို့မဟုတ် အပြာရောင်များဖြင့် ရှိနေကြသည်။ အချို့သောလူနေအခန်းတွဲတိုက်များ၏ ဆေးရောင်အမှတ်အသားကို ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ခွဲခြားထားသည်မှာ ဥပမာကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းများသည် အပြာရောင်ခေါင်မိုးနှင့် တိုက်များတွင်နေကြပြီး၊ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းများမှာမူ အစိမ်းရောင်ခေါင်မိုးများ နှင့်နေကြသည်။ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများသည် လုံးချင်းအိမ်ကြီးများတွင် နေထိုင်ကြသည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နှင့် သမ္မတအိမ်တော် တို့သည် ဝန်ကြီးဌာနဇုန်၌ တည်ရှိသည်။ မြို့တော်ခန်းမအဆောက်အဦးသည် ဆိုဗီယက်အစိုးရအဆောက်အဦးနှင့် ဆင်တူပြီး၊ ခေါင်မိုးပုံစံမှာမူ မြန်မာ့ဟန်ဖြစ်သည်။ မြို့တော်ခန်းမ၏ အနောက်ဘက်တွင် ကလေးကစားကွင်းနှင့် ရေတံခွန်အတုရှိပြီး၊ ထိုနေရာတွင် တေးဂီတလျှပ်စစ်မီးရောင်စဉ်ပွဲကို နေ့တိုင်းပြသသည်။ ဝန်ကြီးဌာန အဆောက်အအုံ အများစုသည် ပုံစံအားဖြင့် ဆင်တူကြသည်။
အဆင့်မြင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့် အခြားသောအရေးပါသည့် စစ်အရာရှိကြီးများသည် သာမန်ဝန်ထမ်း များနေထိုင်ရာမှ ၁၁ ကီလိုမီတာကွာဝေးသည့် စုပေါင်းဝင်းကြီးအတွင်းတွင် နေထိုင်ကြပြီး၊ ထိုဝင်းကြီးတွင် ဗုံးခိုကျင်းများ၊ မြေအောက်ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းများ ပါရှိသည်ဟုဆိုပြီး အများပြည်သူအတွက် ကန့်သတ်နယ်မြေဖြစ်သည်။ မြို့တွင် တပ်မတော်ဇုန်ဟုလည်း သီးသန့်ရှိပြီး၊ ခွင့်ပြုမိန့်မရှိပဲ နိုင်ငံသားများ သို့မဟုတ် အခြားသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။
ဟိုတယ်ဇုန်တွင် နားနေစံအိမ်ပုံစံ ဟော်တယ်များသည် လက်တစ်ဆုပ်စာလောက်သာရှိပြီး၊ မြို့၏ဆင်ခြေဖုံးရှိ တောင်ကုန်းများပေါ်တွင် ဟိုတစ်ခု ဒီတစ်ခု ရှိနေသည်။ ဤဇုန်သည် မြို့၏မြို့လယ်ခေါင် ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ နေပြည်တော်အတွင်းနှင့် အနီးအနားတစ်ဝိုက်တွင် ယခုလက်ရှိ ဟိုတယ် ၁၂ ခုရှိသည်။ ထိုအထဲမှ ရှစ် ခုသည် နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန် အတွင်းတွင်ရှိနေပြီး၊ နှစ်ခုသည် ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းမပေါ် လယ်ဝေးတွင် ရှိသည်။
အစိုးရသည် နိုင်ငံခြားသံရုံးများနှင့် ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ရုံးများအတွက် မြေ နှစ်ဟက်တာ ပေးထားသည်။
ဗဟိုလမ်းဆုံကုန်တိုက် နေပြည်တော် မြို့မဈေးသည် လတ်တစ်လောတွင် နေပြည်တော်၏ စီးပွားရေးအချက်အချာကျနေသည်။ အခြားသော ဈေးဝယ်ထွက်ရန်နေရာများမှာ သပြေကုန်းဈေးနှင့် ဗဟိုလမ်းဆုံကုန်တိုက် တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဗဟိုလမ်းဆုံကုန်တိုက်ကို ရွှေတောင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုမ္ပဏီမှ ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ကာ နေပြည်တော်ရှိ ဈေးစီမံကိန်းအတွက် ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိက ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဈေးကုန်တိုက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ မြို့မဈေးတွင် စားသောက်ဆိုင်အနည်းငယ်နှင့် လမ်းဘေးအစားအစာဆိုင်တန်းများရှိပြီး၊ သပြေကုန်း ဈေးအနီးတွင်လည်း စားသောက်ဆိုင်များရှိသည်။ မိုင်အနည်းငယ်သွားလိုက်ရုံဖြင့် စိတ်ကြိုက်ညနေစာစားသုံးနိုင်သည့်ဆိုင်များ လယ်ဝေး နှင့် ပျဉ်းမနားတွင်ရှိသည်။
ငလိုက်ကန်ပန်းခြံများသည် အသေးစားရေကစားပန်းခြံဖြစ်ပြီး၊ ငလိုက်ဆည်၏ဘေး ကျွဲရှင်းရွာအနီး တွင်ရှိသည်။ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် နေပြည်တော်မှ ခုနှစ်မိုင်ခန့်ကွာဝေးသည်)။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ငလိုက်ကန်ပန်းခြံတွင် ရေလွှာလျှောစီး၊ သဘာဝအတိုင်းအပန်းဖြေစရာများ၊ နားနေဆောင်များနှင့် ကမ်းခြေတို့ပါဝင်သည်။ ပန်းခြံကို သင်္ကြန် ရုံးပိတ်ရက်များတွင် အများပြည်သူအတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။
နေပြည်တော်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကို တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေ ၄၂၀ နှင့် ရာသီဥတု ထိန်းပေးထားသည့် ပင်ဂွင်း ငှက်အိမ်တို့ဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဤဥယျာဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် ဖြစ်သည်။ နေပြည်တော်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သည် ပျဉ်းမနားမြို့မှ (၁၈) မိုင်အကွာ ၊ ပျဉ်းမနားနှင့် တပ်ကုန်းမြို့ အကြားတွင် တည်ရှိသည်။ (၆၁၂) ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၈) တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ကာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့အထိ နေပြည်တော် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင်
နို့တိုက်သတ္တဝါပေါင်း - (၃၂) မျိုး - (၂၈၀) ကောင်
တွားသွားသတ္တဝါပေါင်း - (၁၂) မျိုး - (၆၂) ကောင်
ငှက်မျိုးနွယ်ပေါင်း - (၄၃) မျိုး - (၂၇၄) ကောင်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင် ကျက်စားခြင်း မရှိသော ပင်ဂွင်း များလည်း မွေးမြူပြသထားသည်။ တနင်္လာနေ့မှအပ ကျန်နေ့တိုင်း ဖွင့်လှစ်သည်။
အမျိုးသားဆေးဖက်ဝင်အပင်များပန်းခြံကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ဧက ၂၀၀ (ဝ.၈၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ) ကျယ်ဝန်းသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကို ပြသထားသည်။ ပရဆေးဥယျာဉ်တွင် ဆေးဖက်ဝင် ပရဆေးပင် မျိုးစိတ်ပေါင်း (၅၀၀) ကျော် စိုက်ပျိုးထားရှိသည်။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်သူများအတွက် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကို နေပြည်တော်တွင် တစ်ခါတစ်ရံ ကျင်းပသည်။ နေပြည်တော်ရှိ လမ်းဆုံဗဟိုကုန်တိုက်တွင် ရုပ်ရှင်ရုံ တစ်ရုံ၊‌ေနပြည်တော်ရေပန်းဥယျာဉ် အနီးရှိအောင်သ‌ေပြ ရုပ်ရှင်ရုံ နှင့် ပျဉ်းမနား နှင့် တပ်ကုန်း တို့တွင် တစ်ရုံစီ ရှိသည်။
နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေသည် နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသည်။ နေပြည်တော်ကောင်စီကို ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦး၊ အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးနှင့် ကောင်စီဝင် ကိုးဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နေပြည်တော်မြို့တော် စီမံခန့်ခွဲခြင်းကိစ္စရပ်များကို နေပြည်တော်ကောင်စီ မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်။ နေပြည်တော်မြို့တော်ဒေသတွင် မြို့စစ်စစ် (မြို့လယ်ခေါင်)နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မြို့နယ် ရှစ်ခု ပါဝင်သည်။ မြို့လယ်ခေါင်ကို ဆက်၍ ရပ်ကွက်လေးခု ခွဲထားသည်။ ပျဉ်းမနား၊ လယ်ဝေး နှင့် တပ်ကုန်း မြို့နယ်များသည် ယခင်က ရမည်းသင်းခရိုင်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသများ ဖြစ်ကြသည်။ ဥတ္တရသီရိ၊ ဒက္ခိဏသီရိ၊ ပုဗ္ဗသီရိ၊ ဇမ္ဗူသီရိ၊ နှင့် ဇေယျာသီရိ တို့သည် မြို့နယ်အသစ်များ ဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာ၂၀၀၉ တွင် အားလုံးသော ဝန်ကြီးဌာနရုံးများသည် အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပြီးဖြစ်သည်။
ဇေယျသိဒ္ဓိ(ဇေယျသိဒ္ဓိ ပါဌိမှ) ဥတ္တရသီရိ(ဥတ္တရသီရိ ပါဌိမှ)
ပညာသိဒ္ဓိ(ပညာသိဒ္ဓိ ပါဌိမှ ) ပျဉ်းမနား ဒက္ခိဏသီရိ(ဒက္ခိဏသီရိ ပါဌိမှ)
ဘောဂသိဒ္ဓိ(ဘောဂသိဒ္ဓိ ပါဌိမှ) လယ်ဝေး ပုပ္ပသီရိ(ပုပ္ပသီရိ ပါဌိမှ)
မင်္ဂလာသိဒ္ဓိ( မင်္ဂလာသိဒ္ဓိ ပါဌိမှ) တပ်ကုန်း ဇမ္ဗူသီရိ (ဇမ္ဗူသီရိ ပါဌိမှ) ၊ဇေယျာသီရိ (ဇေယျာသီရိ ပါဌိမှ)
အမှတ် ၁ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊
အမှတ် ၂ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
အမှတ် ၃ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
အမှတ် ၄ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
အမှတ် ၅ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
အမှတ် ၆ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
အမှတ် ၇ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
အမှတ် ၈ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
အမှတ် ၉ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
အမှတ် ၁၀ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
အမှတ် ၁၁ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
အမှတ် ၁၂ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း
ပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းများသည် အနီးအနားတစ်ဝိုက်အတွက် အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အရှည်ကီလိုမီတာ ၃၂၃.၂ ရှိသော တစ်ဖက်နှစ်လမ်းသွား ရန်ကုန်နေပြည်တော်အမြန်လမ်းမကြီးသည် နေပြည်တော်ကို ရန်ကုန်နင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးထားပြီး၊ ၅၆၃ ကီလိုမီတာရှည်လျားသည့် ရန်ကုန် -နေပြည်တော် - မန္တလေး လမ်းမကြီး၏အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ ရိပ်သာလမ်းမကြီး ၂၀ ရှိပြီး၊ မြို့ထဲမှလမ်းများကဲ့သို့ ကြီးမားပြီးရှင်းလင်းနေသည်။
နေပြည်တော်အတွက် ပျဉ်းမနားဘူတာ လယ်ဝေးဘူတာနှင့် နေပြည်တော်ဘူတာကြီးတို့ ရှိသည်။ ပျဉ်းမနားဘူတာသည် ရန်ကုန် - မန္တလေးရထားလမ်းပေါ်တွင် ရှိပြီး လယ်ဝေးဘူတာသည် ပျဉ်းမနားနှင့် ကျောက်ပန်းတောင်း လမ်းပေါ်တွင်ရှိသည်။ ရန်ကုန်မှ ပျဉ်းမနားသို့ ရထားဖြင့် ၆ နာရီကြာသွားရသည်။
မြို့တော်အသစ်တည်ဆောက်စဉ်က ရထားပို့ဆောင်ရေး ပြည့်စုံလာစေရန် ပျဉ်းမနား၏နောက် တစ်ဘူတာရွာတော်ဘူတာတွင် နေပြည်တော်ဘူတာစီမံကိန်းများကို တည်ဆောက်ခဲ့၍ ယခုအခါ နေပြည်တော်ဘူတာကြီးအဖြစ် တည်ရှိနေသည်။
နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (ယခင်အမည် အေလာလေဆိပ်) သည် နေပြည်တော်မြို့မှ အရှေ့တောင်ဘက် ၁၆ ကီလိုမီတာအကွာ အေလာနှင့်လယ်ဝေးမြို့ တို့အကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ပြည်တွင်းလေကြောင်း လိုင်းများဖြစ်ကြသည့် မြန်မာ့လေကြောင်း နှင့် ရန်ကုန်လေကြောင်း တို့သည် ရန်ကုန် နှင့် နိုင်ငံအနှံ့ရှိ အခြားသောမြို့များသို့ ပုံမှန်ပြေးဆွဲရန်အတွက် ဤလေဆိပ်ကို အသုံးပြုကြသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ မှစတင်၍ အဓိကဆောက်လုပ်ရေးများကို တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်ပြီး၊ တစ်နှစ်လျှင် ခရီးသည် ၃.၅ သန်း ဝင်ထွက်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
ဘတ်စ်ကား နှင့် ကားများပြင်ဆင်
အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများသည် နံနက်ပိုင်း နှင့် ညနေပိုင်းတို့တွင် ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာရုံးများသို့ လွန်းပျံဘတ်စ်ကားများ ပြေးဆွဲပေးသည်။ မြို့တွင် ဗဟိုဘတ်စ်ကားရပ်နားကွင်း နှင့် စစ်တပ်ပိုင်သည့် အငှားယာဉ်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ရှိသည်။
နေပြည်တော် ခုတင်(၁၀၀၀)ဆံ့ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီး
နေပြည်တော် မျက်စိ နား နှာခေါင်း လည်ချောင်း အထူးကု ဆေးရုံကြီး
နေပြည်တော် အမျိုးသမီး ဆေးရုံ
နေပြည်တော် အရိုး ဆေးရုံ
နေပြည်တော် တိုင်းရင်းဆေး ဆေးရုံ
ပျဉ်းမနား အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံ
တပ်ကုန်း အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံ
လယ်ဝေး အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံ
ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိအားကစားကွင်း၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိမိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်း နှင့် ဇေယျာသီရိအားကစားကွင်း တို့သည် မြန်မာအသင်း၏ နိုင်ငံတကာ ပွဲများအတွက် နေပြည်တော်၌ တည်ရှိသည်။ နေပြည်တော် ဘောလုံး အသင်း သည် နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ကိုယ်စားပြု အသင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာ နေရှင်နယ် လိဂ် (Myanmar National League) ခေါ် ပရိုစနစ်ဖြင့် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတို့တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး စီဒီအမ်အေ ကြိုးမဲ့ဖုန်း တစ်မြို့လုံးတွင် သုံးစွဲနိုင်သည်။ အစိုးရတိုက်ခန်းများတွင် နေထိုင်သည့် ဝန်ထမ်းများအား ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းလိုင်း တပ်ဆင်ခွင့် မရှိပါ။ အများသုံးဖုန်းကိုသာ သုံးစွဲရမည်။ နေပြည်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ရက် ၂၄ နာရီပတ်လုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော နေရာဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် (အတွင်း)
၂၀၁၃ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ကျင်းပစဉ်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ ဟီလာရီ ကလင်တန် လာရောက်လည်ပတ်စဉ်
↑ News Briefs။ The Myanmar Times။ Myanmar Consolidated Media (20 March 2006)။ 26 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 April 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Naypyidaw: Burma။ Geographical Names။ 2011-12-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "An Introduction to the Toponymy of Burma (October 2007) – Annex A"p. 8, The Permanent Committee on Geographic Names (PCGN), United Kingdom Archived 31 October 2008 at the Wayback Machine.
↑ Ntay, Hla Hla (23 February 2007). Myanmar's new capital offers little in the way of luxuries Archived 29 June 2017 at the Wayback Machine.. Agence France-Presse.
↑ "Burma's new capital stages parade"၊ BBC News၊ BBC၊ 27 March 2006။6April 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ McGeown, Kate (8 November 2005). Burma's confusing capital move. BBC News.
↑ Peck၊ Grant။ "Myanmar's Remote Capital Is StillaWork in Progress"၊ The New York Times၊5October 2007။ 20 May 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Australian. "A monument to junta's fear". 16 October 2007
↑ Myanmar Yellow Pages: Nay Pyi Taw Listings။2March 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Built to Order: Myanmar’s New Capital Isolates and Insulates Junta"၊ The New York Times၊ 24 June 2008။
Wikimedia Commons တွင် Napyidaw နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နေပြည်တော်မြို့&oldid=722061" မှ ရယူရန်
၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။